Hetsika amin'ny volana septambra 2019 - The World March
Fikarohana karohy sy fijerin'ny hetsika
Ampidiro ny teny fanalahidy. Fikarohana hetsika ho an'ny teny fanalahidy.
Ampidiro ny toerana Fikarohana amin'ny toerana.
Fijerena ny fomba fijery Event
01 / 09 / 2019	September 2019
0 hetsika, 26
2 hetsika, 27
Famelabelarana ao amin'ny Forum Propolis
Fampisehoana ho an'ireo Fikambanana sy mpifanila trano amin'ny «2 World March Pola Paz ea Nonviolencia” ao amin'ny fikambanana Forum Propolis ao amin'ny faritra Agra
Fanolorana ny 2-MM ao amin'ny Association "Forum Propolis"
27 aogositra @ 2019: 19-21: 00 CEST
Ny ekipa mpanentana A Coruña, dia manolotra ny marika 2 World martsa ao amin'ny Association "Forum Propolis".
1 hetsika, 28
Fanokafana ny Totem Trilha ary omena ho an'ny fandriampahalemana
28 aogositra @ 2019: 08-17: 00 CEST
Ny ekipa mampirongatra ny martsa ao Londrina dia mandray anjara amin'ny fanokanana an'i Totem Trilha sy Dado por la Paz.
0 hetsika, 29
4 hetsika, 30
Fihaonana amin'ny manam-pahefana sy solontenan'ny fikambanana
30 aogositra @ 2019: 16-17: 00 CEST
Misy fivoriana iray atao eo amin'ny Lapan'ny tanàna miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny Manampahefana sy solontenan'ny fikambanana Italiana, Slovenianina ary Kroasia. Fanasana avy amin'ireo manam-pahefana sy fikambanana: https://static.theworldmarch.org/wp-content/uploads/2019/08/Invito_Vabilo-2-World-March-in-PiranSLO.pdf
Kaonferansa ho an'ny mpanao gazety tao Piran
30 aogositra @ 2019: 17-18: 00 CEST
Ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety iraisam-pirenena ho an'ny famelabelarana ny fizarana World World izay handrakotra ny morontsiraka andrefana; ny fitondrana dia nanan'anaka ary teraka tao Piran.
19: 00	 - 20: 30
Rakipahalalana «Ny fiandohan'ny fiafaran'ny fitaovam-piadiana niokleary»
30 aogositra @ 2019: 19-20: 30 CEST
Ny fandinihana ny antontan-taratasy «Ny fiandohan'ny faran'ny fitaovam-piadiana niokleary», novokarin'ny masoivoho Pressenza tamin'ny tsingerintaona faharoa nanaovana ny Fivondronan'ny Firenena Mikambana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary (fampielezankevitra ICAN, loka Nobel fandriam-pahalemana 2017).
+ 1 fanampiny
1 hetsika, 31
17: 30	 - 20: 00
Atrikasa ny fitsipika volamena sy ny fanolorana ny 2ª World martsa
31 aogositra @ 2019: 17-20: 00 CEST
FAMPANDROSO NY ASA GOLOTIA AN-TOKONDRANA: atrikasa fanandramana natao hianarana ny fitsipi-piainana tsy misy herisetra. Manaraka, ny fanolorana ny 2ª WORLD BRAND FOR PEACE AND NON-VIOLENCE, izay hanomboka ny 2 ny volana Oktobra avy ao Madrid ary handia ny Verbano sy Varese ambony amin'ny alahady 1 ny volana martsa.
0 hetsika, 1
0 hetsika, 2
3 hetsika, 3
10: 45	 - 12: 00
Famelabelarana ao amin'ny Institute Training Training, El Bolsón
3 Septambra 2019 @ 10:45 p.m.-12: 00 CMT
Fanolorana ny volana martsa faharoa ao amin'ny Institut fanofanana mpampianatra.
Tetikasa ny "fanombohan'ny fiafaran'ny fitaovam-piadiana niokleary"
3 Septambra 2019 @ 11:30 p.m.-13: 00 CMT
Fanombohana ny "fiandohan'ny faran'ny fitaovam-piadiana niokleary" miaraka amin'ny mpianatra avy amin'ny 4to sy 5 amin'ny taom-pianarana Jacques Cousteau
2N fanolorana MM ao anatin'ny iray amin'ireo mpifanolobodirindrina
3 Septambra 2019 @ 19:30 p.m.-21: 00 CEST
Ny ekipa mpanentana dia manolotra ny 2-MM amin'ny iray amin'ireo Neighborhoods, mba hamaritana.
0 hetsika, 4
2 hetsika, 5
5 Septambra 2019 @ 11:00 p.m.-13: 00 CMT
12: 30	 - 13: 00
Camellia avy any Hiroshima ka hatrany amin'ny Ben'ny tanànan'i Muggia
5 Septambra 2019 @ 12:30 p.m.-13: 00 CEST
Ny fandefasana ny Camellia an'i Hiroshima amin'ny Ben'ny tanàna ao Muggia, Kaomin voalohany. izay niditra tao amin'ny 2 World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fanoloran-tena. Ho tonga ny fanombohan'ny martsa manerantany faharoa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fahatoniana, izay hanomboka amin'ny Oktobra 2 avy any Madrid. Ny Kaominin'i
0 hetsika, 6
0 hetsika, 7
1 hetsika, 8
20: 00	 - 20: 30
Fanolorana ny martsa maneran-tany any Villa Vicentina
8 Septambra 2019 @ 20:00 p.m.-20: 30 CEST
Amin'ny faran'ny faran'ny fahavaratra izay natao tamin'ny 6 ka hatramin'ny 8 tamin'ny septambra 2019, ny 2 World martsa dia atolotra miaraka amin'ny FIASP. Ny World March dia handalo Fiumicello Villa Vicentina amin'ny 27 / 02 / 2020.
1 hetsika, 9
Tonga tany San Pedro de Sula, Hunduras
9 Septambra 2019 @ 08:00 p.m.-17: 00 CEST
Tonga tao San Pero de Sula ny ekipa base ka eo ny hetsika: Ny hetsika fanaovan-gazety eo amin'ny UCENM sy ny UNAH University University Projection de la documentaire "Ny fiandohan'ny faran'ny fitaovam-piadiana niokleary"
0 hetsika, 10
0 hetsika, 11
1 hetsika, 12
13: 00	 - 14: 30
Fitarainana momba ny "extractivism", El Bolsón
12 Septambra 2019 @ 13:00 p.m.-14: 30 CMT
Fitarainana momba ny "extractivism". Ny paosy tsy nokleary.
0 hetsika, 13
0 hetsika, 14
0 hetsika, 15
0 hetsika, 16
2 hetsika, 17
19: 30	 - 20: 45
Fanolorana ny Cidade Vella
17 Septambra 2019 @ 19:30 p.m.-20: 45 CEST
Fanolorana ny fandaminana sy ny mponina ao an-tanàna, ny «2 World March Pola Paz ea Nonviolencia» ao amin'ny Civic Center "Cidade Vella"
Famelabelarana ho an'ireo olona manana ny 2-MM ao amin'ny "Cidade Vella Civic Center"
17 Septambra 2019 @ 19:30 p.m.-21: 00 CEST
Ny ekipa mpanentana an'i Galicia dia manolotra Enti-miasa amin'ny 2-MM ao amin'ny "Cidade Vella Civic Center".
2 hetsika, 18
Fanamarihan'ny Papa, Vatican City
18 Septambra 2019 @ 10:00 p.m.-13: 00 CEST
Fihaonana niaraka tamin'i Papa Françia tamin'ny alàlan'ny delegasiona an'ny ekipa 2ªMM Base izay noforonin'ireo mpikambana avy any amin'ny firenena samihafa any Eoropa sy Amerika. Avy eo, ny fihaonana miaraka amin'ny Sekreteram-panjakana Vatican izay hisy ny lohahevitra: 1) Novambra tamin'ny 2019, amin'ny faran'ny fitsangatsanganana an-tsambo ny Western Western,
Fiomanana ao amin'ny Sekoly ambony Bernardo Frías
18 Septambra 2019 @ 17:00 p.m.-18: 00 CMT
Fanombohana ny "fiandohan'ny faran'ny fitaovam-piadiana niokleary" miaraka amin'ireo mpianatra amin'ny 3er taonan'ny Institut Faharoa Bernardo Frías.
2 hetsika, 19
17 Fihaonana Nobelita ho an'ny fandriampahalemana
19 Septambra 2019 @ 08:00 p.m.-22 Septambra 2019 @ 17:00 p.m. Cdt
Ny ekipan'ny base World World dia mandray anjara ao Mérida, Meksika ao amin'ny "17th Nobel Peace Summit" .17 Fihaonambe Nobel ho an'ny Fandriampahalemana.
Forum iraisam-pirenena momba ny hetsika sosialy sy fikambanana manentana ny fandriampahalemana
19 Septambra 2019 @ 11:00 p.m.-17: 00 CMT
Ity dia Forum iray, izay ny anarany dia "Forum iraisam-pirenena amin'ny hetsika ara-tsosialy ary fikarakarana fandriampahalemana". Ity hetsika ity dia karakarain'ny Secretariat Executive of the Movement for Peace and Life, izay an'ny fiadidian'ny Repoblika Venezoelana. Ny hetsika momba ny maha-olona dia nasaina hanao famelabelarana
5 hetsika, 20
Famantarana ny FAHAFAHANA PEACE ho an'izao tontolo izao ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fisian'ny asa
20 Septambra 2019
Fankalazana iraisam-pirenena momba ny andro fandriampahalemana
20 Septambra 2019 @ 09:00 p.m.-24 Septambra 2019 @ 11:30 p.m. CST
Fankalazana miaraka amin'ny mpianatra ao amin'ny Sekolin'i Espana sy ny Kolejy Superior of Ladies of the International Day of Peace. Ny fananganana ny mariky ny olombelona amin'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandeferana. Mpihira an'ny Colegio Superior de Señoritas, mandika ny hiran'ny 2MM "Andao Manodidina An'izao Tontolo Izao". Fifanakalozana fifanakalozana kilalao ho an'ny kilalao mety. Band
+ 2 fanampiny
7 hetsika, 21
Ny fanadiovana ny Reniranon'i Quemquemtreu, El Bolsón
21 Septambra 2019
Fanadiovana ny Reniranon'i Quemquemtreu, miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny fikambanana mpianatra.
+ 4 fanampiny
3 hetsika, 22
Manatontosa ny fandriampahalemana, Londrina
22 Septambra 2019 @ 08:00 p.m.-17: 00 CEST
Ny fifikirana iraika ambin'ny folo ho an'ny Peace on the Lake dia ankalazaina any Londrina.
2 hetsika, 23
Fiandohan'ny fiandohan'ny fitaovam-piadiana niokleary
23 Septambra 2019 @ 19:00 p.m. CEST
Ny 23 manaraka ny volana septambra, amin'ny ora 19, dia havoaka voalohany ao amin'ny Espana ao amin'ny National Film Library of Madrid (Cine Doré) ilay horonantsary. Nalamin'ny ICAN (Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana 2017) sy ny masoivohom-baovao iraisam-pirenena Pressenza, hokarakarain'ireo
2 hetsika, 24
Fanolorana ny fikambanana Cadiz Press
24 Septambra 2019 @ 19:00 p.m.-21: 00 CEST
Ny ekipa mpanentana ny World March of Cadiz dia mikarakara ny famelabelarana ny Martsa manerantany ao amin'ny The Press Association. Manoloana ny herisetra manerantany dia inona no hataontsika? Ahoana no hamahanantsika an'izany?
0 hetsika, 25
2 hetsika, 26
Andro iraisam-pirenena ho an'ny famongorana ny fitaovam-piadiana niokleary
26 Septambra 2019
Andro iraisam-pirenena ho an'ny famongorana ny fitaovam-piadiana niokleary niokleary nataon'ny Firenena Mikambana.
Ny fifindra-monina, thermometer amin'ny fahasalamana demokratika
26 Septambra 2019 @ 19:00 p.m.-21: 00 CEST
Saure ny tonian-dahatsoratra dia nanangana ny fivoriana: "fifindra-monina, thermometer momba ny fahasalamana demokratika" miorina amin'ny famoahana voaporofo ny tantara momba izany: "Rahalahy Benjamina izay tsy azo sesitany", "Melilla tsy misy fefy" fandriam-pahalemana "(mampiditra traikefa eo amin'io sehatra io). Mpandahateny: Victoria Eugenia Castrillón, Mpanolotsaina fianakaviana
Fiantsoana ny toetrandro izao tontolo izao nantsoin'ny Fikambanana sosialy, Fivondronamben'ny varotra, fiarahamonim-pirenena
Fanolorana ny martsa 2 maneran-tany any El Casar
27 Septambra 2019 @ 18:00 p.m.-20: 00 CEST
Ny ekipa mpanentana ao amin'ny Casar de la Marcha Mundial dia manolotra ny 2 World martsa ho an'ireo mponina eto amin'ity tanàna ity ao amin'ny tranomboky monisipaly.
10: 00	 - 21: 00
Fetin'ny mozika ara-kolontsaina EVA
28 Septambra 2019 @ 10:00 p.m.-21: 00 CEST
Fetiben'ny kolontsaina ara-kolotsaina, miaraka amin'ireo vondrona rehetra izay miseho amin'ny sary aseho eto ambany. Aza very! Download ny fandaharana fampisehoana
1 hetsika, 29
Sangan'asa tarika Circus Off Ballad
29 Septambra 2019 @ 18:00 p.m.-20: 00 CEST
Ny vondrona sirkus Off Ballad (Italia), dia manao ao amin'ny Ivotoerana Kolontsaina an'i El Pozo del Tío Raimundo.
3 hetsika, 30
Herinandron'ny fandriampahalemana sy tsy fahatoniana, Jujuy
30 Septambra 2019-6 octubre 2019
Fiandohan'ny Herinandron'ny fandriampahalemana sy tsy fahatomombanana. Izy io dia hiasa any amin'ny sekoly maromaro miaraka amin'ny tolo-kevitra hisaintsaina miaraka amin'ny lovia Tibetan ary traikefa an-tsoratra manaraka.
16: 30	 - 18: 00
Raisinay ny volana martsa faharoa
30 Septambra 2019 @ 16:30 p.m.-18: 00 CEST
Ny ankizy (lehibe) dia asaina hamorona ny mariky ny olombelona ny Nonviolence mba hiarahaba ny volana martsa maneran-tany izay hanomboka any Madrid amin'ny Oktobra 2.
Tondro kambana kembar / Núñez de Arenas
30 Septambra 2019 @ 18:30 p.m.-20: 30 CEST
Konserena kambana kely eny an-tongotra / Núñez de Arenas ao anatin'ny rafitry ny 2 World martsa.
1 hetsika, 1
28 hetsika, 2
Fifandraisana amin'ny fananganana ny volana martsa
Londrina dia mifandray amin'ny fametrahana ny 2 World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fanoloran-tena.
Andro iraisam-pirenena tsy fanarahan-dalàna, San Fernando, Buenos Aires
Lalàna iraisam-pirenena momba ny tsy fandriampahalemana. Plaza Miter of San Fernando, miaraka amin’ny minisiteran’ny fampandrosoana ny maha-olona ny kaominina. Hisy ny mitsangana sy mpandray anjara: Ala, ny hafatra Silo, toro-hevitra momba ny tsy fanarahan-dalàna, Ecowork, Vondron'olona Haitian, Forum Sosialin'ny Humanista, sns. Diabe ara-panoharana no hatao manodidina ny kianja.
The World March Fest, Roma
2 Oktobra 2019 @ 17: 00-4 Oktobra 2019 @ 00: 00 CEST
Fankalazana ny fetin'ny martsa manerantany amin'ny martsa maneran-tany, any Roma. Hetsika marobe amin'ny fanombohan'ny 2 World martsa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana.
+ 24 fanampiny
12: 00	 - 14: 30
Fanolorana ny martsa manerantany amin'ny parlemanta italiana
3 Oktobra 2019 @ 12: 00-14: 30 CEST
Hisy ny famelabelarana ny 2MM miaraka amin'ny fiandohany tamin'ny andro teo aloha (antenaina miaraka amin'ny sary maro) ary ny fampirantiana ny fanadihadiana "Ny fanombohan'ny fitaovam-piadiana niokleary."
3 hetsika, 4
22: 00	 - 23: 30
Fanentanana ny 2 World March, Sao Paulo
4 Oktobra 2019 @ 22: 00-23: 30 -03
Ny Warmis Base Team of Convergence of Cultures dia hikarakara antoko fanombohana ho an'ny martsa amin'ity zoma ity, amin'ny trano fisakafoanana malaza Palestiniana iray any São Paulo - Brezila.
3 hetsika, 5
6º Manifesto ho an'ny fandriampahalemana sy ho an'ny famoanana ny zaza
Ny 6º Manifesto ho an'ny fandriam-pahalemana ary ho an'ny fanalefahana ny zaza dia tanterahina.
Fankalazana tsy herisetra amin'ny herinandro, Tiger
Nandritra ny Am-Tema Cultation Association of Villa la Ñata any Tigre, Herinandron'ny fankalazana ny tsy fanoloran-tena.
3 hetsika, 6
Forum Forum ho an'ny ankizy, Fiumicello
6 Oktobra 2019 @ 18: 00-20: 00 CEST
Forum Forum ho an'ny ankizy "La vita mia vita da zucchina".
19: 00	 - 23: 30
Antoko ho an'ny tsy herisetra, Cádiz
6 Oktobra 2019 @ 19: 00-23: 30 CEST
Fety ho an'ny tsy herisetra ", ao anatin'ny Lapan'i Santa Catalina. Ho antokon-draharaha misokatra izany. FIDA MANAO - Misokatra Micro ho an'ny rehetra. Mihira, mamaky tononkalo, manao gitara, dihy, teatra, lazao izay ataon'ny fikambanana, ambarao aminay Raha te handray anjara ianao, andefaso anay fotsiny ny Whatsaap, handaminana ny filaharan'ilay asa.
Mandritra ny andro